Xeebaha ugu fiican Shiinaha | Wararka Safarka
Xeebaha ugu fiican Shiinaha
Maria Jose Roldan | | Shiinaha, Xeebaha
Markay dadku ka fikiraan inay aadaan fasax xeebta, waxa caadiga ah waa inay ka fikiraan Isbaanishka waaweyn ama xitaa xeebaha Yurub. Kuwa doonaya booqo xeebaha fogfog Waxaa laga yaabaa inaad doorbideyso inaad diyaarsato duulimaad oo aad ka gudubto badda Atlantic oo dhan si aad u aragto xeebaha Latin Amerika ama Mareykanka. Laakiin waligaa miyaad ka fikirtay ogaanshaha xeebaha Shiinaha?
Waxaan leenahay meeraha cajiibka ah ee na siiya buuro waaweyn oo qurux badan, muuqaal qurux badan iyo xeebo neefteena naga qaada Sabab jirta awgeed dhulkeenna waxaa sidoo kale loo yaqaan "meeraha buluugga ah". Sababtoo ah badda buluugga ah waa mid lagu yaqaan adduunkeenna runtiina biyo la’aan, nolol ma jirteen. Sidaas, waa inaan ixtiraamnaa badaheena iyo mid kasta oo ka mid ah geesaha ay Hooyada Dabeecaddu innagu siiso Dhulkeenna cajiibka ah.
Laakiin maanta waxaan rabaa inaan kaala hadlo xeebta qaar oo laga yaabo inaadan maskax badan lahayn laakiin taasi caan ku tahay malaayiin dad ah. Waxaan ula jeedaa xeebaha ugu fiican Shiinaha. Sidaa darteed, haddii hal maalin aad go'aansato inaad Shiinaha aado fasax, waxaad ogaan doontaa inaad haysato in ka badan 18.000 kilomitir oo xeeb ah si aad ugu raaxaysato.
1 Waddan badaha lagu maydhay
2 Xeebta Hainan
3 Xeebta Liaoning
4 Xeebta Guangxi
5 Xeebta Shandong
Waddan badaha lagu maydhay
Dal lagu maydhay Badda Bohai, Badda Jaalaha ah, Bariga iyo Koonfurta Shiinaha iyo Badda Koofureed. Taasi waa sababta haddii aad safar ugu baxdo Shiinaha, ma seegi kartid fursadda inaad ku soo booqato xeebaha inta badan soo jiidanaya dareenkaaga, maxaa yeelay haddii aad go'aansatay inaad booqato dhammaantood, hubaal maheysid waqti aad ku booqan karto dhammaan baaxadda weyn xeebta.
Xeebtani waxay ku taal jasiirad kuleyl ah oo magaceeda la mid ah tan xeebta: "Hainan" waana shaki la'aan inay tahay meel dalxiis oo aad ugu habboon in lagu booqdo kaligeed ama qoyska. Xitaa xitaa xeebaha ugu wanaagsan ee Kariibiyaanka isma waafaqsana.
Xeebtaan waa mid aad u ballaaran waxayna u qaybsan tahay aagag, marka waa lama huraan inaad iyaga taqaanid si aad si fiican isu dejiso. Tusaale ahaan, waad heli kartaa aagga Sanya ee qaybta koonfurta xeebta halkaas oo aad ka heli doontid wadooyin geedo timireed oo aad ku wareegi karto iyo ciida cad oo shaki la’aan soo jiidan doonta dareenkaaga, gaar ahaan haddii aanad u baran carrada saafiga ah ee xeebaha!
Bariga waxaad ku raaxeysan kartaa toddobo kilomitir oo xeeb ah meel lagu magacaabo Yalong Bay, laakiin haddii waxa aad raadineyso ay yihiin xasillooni markaa waa inaad aadaa koonfur-galbeed xeebta adoo aadaya Jasiiradda Luhuitou. Waxay ku habboon tahay nasashada buuxda!
Laakiin sidoo kale waxaad aadi kartaa jasiiradda Dadongha oo ku taal koonfur-bari inaad ku raaxeysato jasiirad gebi ahaanba paradisiacal ah. Waxa ugu xun ayaa ah in had iyo jeer ay aad u camiran tahay maxaa yeelay way aad u yar tahay, laakiin waxaa habboon in la booqdo!
Xeebta Liaoning waxay ku taal gobolka isla magaca, woqooyi-galbeed Shiinaha. Gobolkan waxaad ka heli kartaa magaalooyin dhowr ah oo midkood uu aad ugu soo jiito dalxiiska maadaama uu leeyahay soo jiidasho badan iyo xeebaha cajiibka ah, Waxaan ula jeedaa magaalada Dalian.
Haddii aad safar la aadeyso qoyska oo aad rabto inaad ogaato xeeb ku habboon qof walba, markaa waxaad u baahan tahay oo keliya safar 5 kiiloomitir u jirta Dalian oo aad xeebta Bangcuidao Juggu. Haddii aadan aqoon meesha aad dagayso, waxaad ku samayn kartaa Bangcuidao Binguan Hotel maadaama xeebtu ku taal beeroheeda. Waxa kaliya ee xun waa in si aad awood ugu yeelatid xeebta waa inaad bixisaa 2 euro maxaa yeelay waa mid gaar ah.
Hadaad rabto inaad aado xeeb dhagax leh waad tagi kartaa Xeebta Tiger, taas oo ah wax weyn in lagu qaato maalinta oo lagu raaxeysto qorraxda iyo badda. Laakiin haddii aad rabto inaad waxyar ka bixiso si aad ugu tagto xeebta laakiin aanad u buux dhaafin, weli waa u qalantaa inaad bixiso 5 yuan si aad u gasho Fujiazhuang Beach ama Golden Stone Beach, laakiin waxay ka yar tahay 60 kilomitir Dalian, si aad u hesho inaad kireysato gaari ama aad raadsato gaadiid dadweyne oo halkaas ku geynaya ka dibna kuu oggolaan doona inaad ku laabato meeshii aad degtay.
Haddii fasaxyadaadu ku yaalliin koonfurta-galbeed ee Shiinaha, markaa waxaad aadi kartaa gobolka Guangxi maaddaama xeebteeda aysan kaa tagi doonin danayn. Waxay leedahay xeebo aan caadi aheyn oo ugu quruxda badan Shiinaha oo dhan, taasna waa u qalantaa booqashada gobolkan. Ku dhowaad 10 kiilomitir oo u jirta bartamaha magaalada Beihai waxaad ka heli kartaa xeeb dhererkeedu ku dhow yahay laba kiiloomitir. Waa inaad bixisaa 3 euro si aad uhesho laakiin waa u qalantaa. In kasta oo ay kugu adkaan karto inaad fahamto sababta ay tahay inaad lacag u bixiso si aad u gasho xeebaha, laakiin waa hab looga hortago ciriiriga badan iyo inaad awood u leedahay inaad had iyo jeer ku hayso xaalad wanaagsan oo aad u ilaaliso si qumman.
Xeebahaas waxaad ka heli kartaa bariga Shiinaha oo haddii aad u tagto hay'ad safar waxay hubaal kuu sheegi doonaan Qingdao sababta oo ah qulqulka dalxiiska ee weyn. Magaaladaan, iskudhafka naqshadaha Shiinaha iyo Yurub. Sanadkii 2008 waxay ahayd goobtii lagu qabtay Cayaaraha Olimbikada ee Beijing, markaa waxaad ka heli kartaa fikrad ahmiyadda magaaladani leedahay. Intaas waxaa sii dheer, oo haddii taasi aysan ku filnayn, malaha wax ka yar lix xeebood oo caan ah oo aad booqato haddii aad nasiib u yeelato inaad safar ku aado magaaladan quruxda badan.
Xeebaha ugu caansan waxaa ka mid ah Qubayska Xeebta Waxay leedahay marin fudud maadaama ay ku xigto xarunta tareenka. Laakiin haddii aad doorbideyso inaad waxoogaa sii fogaato, waad qaadan kartaa doon oo waxaad tagi kartaa jasiiradda huruudda ah ama HUang Dao, meelo badan oo ku habboon (nadaafadda biyaha iyo ciriiriga yar awgeed) si aad u qubaysatid.
Kuwani waa qaar ka mid ah xeebaha ugu caansan waxaad ka heli kartaa Shiinaha iyo in ay mudan tahay in la booqdo. Laakiin ugu horreyntii, waxaan kugula talinayaa inaad hoy ka hesho meel u dhow xeebaha aad rabto inaad booqato iyo inaad ogaato sida loo helo mid kasta oo ka mid ah. Shiinaha aad ayuu u weyn yahay waana muhiim in la helo waddo loo maro goobaha laga maamulo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » safarka » Xeebaha » Xeebaha ugu fiican Shiinaha
Jasiiradaha Miyako, Kareebiyaanka Jabbaan
Jardiinooyinka loo yaqaan 'nudist park' ee magaalada Munich Englischer Garten